Mibvunzo - FAQs - Danyang NQ Nhabvu Uye Kusimba Co, Ltd.
Ndirini pandingawana kotesheni yezvinhu?
Penguva dzose, tichakutsanangurira iwe mukati maawa makumi maviri nemana mushure mokunge tawana kubvunza kwako. Kana ichikurumidza kwazvo, pls tibata nesu neinternet kutaurirana, mutengesi kana foni!
Mutengo wechigadzirwa unosanganisira logo here? Ndingaite sei kuti ndigadzire yangu tsika logo uye kurongedza?
Mutengo wechigadzirwa wakanyorwa haubatanidzi logo, chigadzirwa chinowanzoshandisa poly bag kurongedza. Iwe unogona kutaura nekutengesa kwedu kune chaiwo mutengo kana iwe uchida logo kana tsika kurongedza.
Tinogona here kuwana imwe sampuro yekusimbisa pamberi peodha?
Hongu, zvaisazove dambudziko kutora imwe sampuro yekusimbisa pamberi pedu tese kubvumirana pamutengo! Samples mutengo uye mari yekutumira ichaunganidzwa kubva kune vatengi, hongu, isu tinokudzosera iwe semuenzaniso mutengo mushure mekunge waisa odha kubva kwatiri !
Unogona here kuita edu mazano?
Ehe, hapana dambudziko! Iwe unongotipa iyo mifananidzo ndizvo, vagadziri vedu vanozoita iyo yekuveza mifananidzo yekutarisa kwako maererano nemifananidzo yako!
Sei pamusoro muripo mazwi?
T / T, Western mubatanidzwa, Paypal, Mari Grame, zvichingodaro.